Kukura kwePenis zvigadzirwa - 50%
Home » Kukura kwePenis zvigadzirwa
Kukura kwePenis zvigadzirwa
Izvo zvakajairika zvigadzirwa zvekuwedzera kwepenisi zvinosanganisira zvina marudzi ezvigadzirwa: mapiritsi, machira, kurovedza muviri, uye zvigamba.
Kuti uzive kuti ndezvipi zvakakunakira iwe, heano mamwe emapoinzi eimwe neumwe aunogona kuti uwedzere kudzidza.
Kubva pakuona kwevakawanda vari kutsvaga nzira yakapusa, mapiritsi ndiyo nzira iri nyore yekuita. Izvi zvinonyanya kuita kuti zvive nyore kuwana uye kutenga. Uye vazhinji vanowana izvi zvigadzirwa zviri nyore kushandisa.
Zvinoenderana neimwe ongororo yemusika yakaitwa nguva pfupi yadarika, zvinonzi pane kuwedzera kukuru kwevatengi kwerudzi urwu rwekuwedzera mudziyo nekuda kwezvikonzero zvambotaurwa.
Izvo zvigadzirwa izvi zvinonyanya kuzivikanwa ndezvekuti zvinonyanya kushanda pakuwedzera kuyerera kweropa munzvimbo yepenile – kuita senge chinosimudzira – sezvo muviri unogadzirira kuita zvepabonde.
Kutora mapiritsi ekuwedzera mboro kwenguva yakakodzera kunogona kuratidza mhedzisiro inokudzwa panokura kukura uye girth renzvimbo yako yepenile. Mamwe mabhenefiti anosanganisira kuwedzera kwesimba repabonde remushandisi, kuomarara kweiyo erection, ejaculation zvakanakira, nevamwe.
Iyo nzira ingangove inonyanya kufarirwa gore rino pakati pevarume vanoda kuwedzera nhengo yavo, vangave vaine diki kana hombe, anowedzera magel. . Nechiito chayo chiriporipotyo, iyo gel inokasira kutapudza tsinga munhengo yemurume, nekudaro ichigonesa kudzikamisa zvakanyanya uye mboro hombe panguva yebonde.
Vakatambanudza vanodanwa savakadaro nekuti ivo vanobatsira kutambanudza uye kuwedzera yako erectile tishu mass. Izvi zvigadzirwa zvinoshandisa traction izvo zvinogona kukonzeresa kuti maseru ari mukamuri yepenile kuti aite – zvichikonzera nyama yako yemuviri munzvimbo iyoyo kuti iwande, uye kukurudzira kumisikidzwa.
Penile kusimudzira kurovedza hakudi mapiritsi kana kuvhiyiwa kuti zviite kuti zvishande. Iyo ndiyo yakasarudzika nzira yekuwana hukuru hukuru hwepeni.
Izvi zvinogona kuitwa kwepfupi seanomwe (7) maminetsi, uye zvinogona kuitwa mazuva ese kuti zvive nemhedzisiro. Izvi zvinonyanya kugadzirisa chero nhanho kana kusimba kwaunonyanya kugadzikana kutanga nazvo pakutanga, kusvikira iwe uchikwanisa kuzvishandira iwe kusvika padanho repamusoro-rekusimba penile kurovedza muviri miitiro kuti uwane zvakanyanya mabhenefiti.
Izvo zvakada kufanana nekushandiswa kwemapiritsi, zvigadziriso zvigadziriso zvinoshanda mukumisikidza yakakodzera mishonga yemisanganiswa iyo ine kune yako yeropa kuyerera. Asi maitiro ayo akasiyana nemishonga yekuwedzera mboro nekuti zvinhu izvi zvinoshanda pane transdermal tekinoroji iyo inokubatsira iwe kuti uwane saizi yaunoda munguva inokurumidza.
Nezvizhinji zvezvigadzirwa zvekuwedzera kwepenisisi kunze uko, unogona kusarudza kunakirwa nenzira isina kuvhiyiwa mukuwana hukuru hwepenile